IXiaomi Mi 9 Lite yenziwe ngokusemthethweni ngoSeptemba 16 | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9 Lite sele inomhla wentetho
Uluhlu oluphakathi lweXiaomi luyaqhubeka nokukhula, kuba kwiintsuku ezimbalwa silindelwe yimodeli entsha. Uhlobo lwesiTshayina Sele ebhengeze intetho esemthethweni yeXiaomi Mi 9 Lite. Imodeli entsha kolu luhlu lwaphakathi kwegama lesiTshayina. Ayiloxesha lokuqala sisiva ngale modeli, ezathi iiveki zabhengezwa njengezisondele.
Kwakhona, le Xiaomi Mi 9 Lite intsha ayisiyonto intsha. Ukusukela lo modeli iya kuba luhlobo lwamazwe aphesheya lweCC9Imodeli ethe yatyhilwa ngokusesikweni kweli hlobo kodwa ngoku ifumana ukukhutshwa kwegama elitsha phantsi kwegama elitsha, nangona kungenjalo.
Umboniso osemthethweni weXiaomi Mi 9 Lite Ibhiyozelwa ngalo Mvulo, nge-16 kaSeptemba. Ulwahlulo lwaseSpain lomenzi ulubhengezile, ukuze sibe nokuncinci kakhulu ukuba sazi le fowuni. Nangona ukucaciswa kwayo kuyinto esiyaziyo iiveki. Ngoku ifumana igama elitsha.
Ngomvulo olandelayo kuzakufika ilungu elitsha losapho lweMi 9! Sele ulungele? pic.twitter.com/p9isTJlkkt
-Xiaomi España (@XiaomiEspana) Septemba 12, 2019
Enye yamathandabuzo amakhulu lixabiso eliza kuba noluhlu oluphakathi ekuqalisweni kwayo kwintengiso. Kungenxa yokuba inokuboniswa njengemodeli evelisa inzala kubasebenzisi abaninzi kweli candelo lentengiso. Ke yimodeli enokubakho.
NgoMvulo sinokwazi yonke into malunga nale Xiaomi Mi 9 Lite in umboniso wohlobo lweTshayina eMadrid, eza kusinika zonke iinkcukacha malunga nefowuni kunye nokwaziswa kwayo kwintengiso. Ndinomdla wokubona ukuba kulonyaka luluhlu lweMi 9 olukhulayo, kunye neemodeli zazo zonke iintlobo ngaphakathi kwalo.
Kuba iRedmi K20 iguqulwe yenziwa iMi 9T Pro. Ke uphawu lukhethile kulo nyaka ukuhambelana okuthile ngokwamagama. Ukuba unomdla kule Xiaomi Mi 9 Lite, ngoMvulo siza kukuxelela konke malunga noluhlu oluphakathi lwegama lesiTshayina. Ucinga ntoni ngokufika kwale modeli?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9 Lite sele inomhla wentetho
Uyilo lweMoto eNest kaGoogle ngenkxaso yokuxhoma eludongeni kunye ne-3,5 mm jack iqinisekisiwe
Isiqalisi se-GCA sisiqalisi esitsha kuluntu lomsebenzisi lwe-Android Go